FISOTROAN-DRONONO - CNAPS : Voafetra ho 120 isan’andro ireo zokiolona mahazo vola
Atao ankilabao hatrany. Voafetra ho 70 ireo zokiolona afaka mandray ny vola fisoatron-drononony ao amin’ny Cnaps ny maraina, raha 50 ihany ny hariva. 21 décembre 2016
Ny ankoatra izay dia tsy maintsy miverina indray ny ampitso. Amin’ny 4 ora sy sasany maraina dia efa misy tonga milahatra ireo zokiolona handray ny fisotroan-dronono ao amin’ny Cnaps eto Mahajanga. Maka ny taratasim-bolany aloha izy ireo vao milahatra indray eny amin’ny BOA.
Tena mitaraina amin’ny fijaliany amin’io filaharana maka vola ireo zokiolona ireo. “Ny harerahana etsy an-daniny ny hafanana mamely, toa tsy misy hajany, hoy izy ireo, ny volofotsiny”. Ny BOA eny Mahajanga be mba misy tohatra azo ipetrapetrahaa na mafana aza ny andro fa ny eny Tsaramandroso dia tsy misy azo ipetrahana hiandrasana ny fotoana handraisana vola mihitsy.
Mitaky ny mba hamahana ny olan’ny fandraisany fisotroandronono ho azy ireo beantitra. Angatahan’izy ireo amin’izany manokana ny hanaovana ezaka manokana amin’ny fotoana fandraisan’izy ireo izany.
Marihina fa isan-telo volana vao mandray izany volany izany ireo mpandray fisotroandonono ao amin’ny Cnaps kanefa matetika ny faharoa na fatelon’ny andro na mihoatra aza vao mahazo ny anjarany ny ankamaroany.